Maamulka galmudug oo ahlu-sunna u sheegay in ay doonayaaan in si nabad ah ula wareegaan dhuusa-mareeb | BanaadirTimes.com
Maamulka galmudug oo ahlu-sunna u sheegay in ay doonayaaan in si nabad ah ula wareegaan dhuusa-mareeb
Mas’uuliyiinta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa sheegay ay soconayaan qorshayaal isugu jira sidii amni loogu soo dabaali lahaa deegaanada Galmdug iyo xoojinta arrimaha dib u heshiisiinta si loogu guuleysto hadafka uu maamulkaasi uu hoogsanayo.
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmduug oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta Qaranka ayaa faah faahin ka bixiyay amniga guud, iyo wax uu maamulka ka damacsanyahay sidii loo wajihi lahaa arrimahaasi, xili weli ay jirto tabashooyin ay qabaan maamulka Ahlusuna Waljamaaca ee Gobolada Dhexe ee dalka.
Cusmaan Ciise Nuur(Taardhuleed) oo ah wasiirka Amniga Gakmudg ayaa ugu horeyn waxaa uu ka hadlay dagaalo dhawaan ka dhacay deegaano katirsan Gobolka Galgaduud,isagoo xusay in ciidamada Galmudug aysan wax lug ah ku lahayn dagaaladaasi.
“Waad ogtihiin muddo 3 bilaad ku dhow waxaa dagaalo ay ka dhacayeen deegaano katirsan Galmudug,sida Xeraale, dad badan ayaa ku dhintay, kuwo kale waa ay barakeceen,weli deegaanadii waa cidlo, maamulka Galmudug waxaa uu wadaa dadaalo ku aadan sidii gar gaar loo gaarsiin lahaa dadkaasi”, Ayuu yir Wasiirka Amniga Galmudug.
Wasiirka Amniga Galmudug ayaa sheegay in amniga aan la sugi Karin ilaa wada hadal lagu dhameeyo cidkasta oo tabashooyin qabta.
“Waxaa inoo qorsheysan ka wasaarada ahaan in aan sugno amniga dhamaan deeganaada Galmudug,Maamulka Galmudug hadafkiisu waxaa uu yahay in waxkasta wada hadal lagu dhameeyo, si amniga loo sugu, waad ogtihiin Al-shabab waxaa ay joogaan deegaano badan, Magaalada Dhuuso Mareeb in latago waxay muhiim u tahay in laga guuleysto SHabaab, waxaana qorshaha uu yahay in wada hadalnabadeed aan halkaasi ku tago”, Ayuu intaasi sii raaciyay Wasiir (Taar-Dhuleed).
Madaxweynaha Dwoald Goboleedka Galmudug ayaa dhawaan sheegay in ay doonayaan in wada hadal lagu dhameeyo tabashooyinka ay qabaan Ahlusuna Waljamaaca,islamarkaan maamulka uu noqon doono mid loo dhan yahay.